Nsọpụrụ ụbọchị: zere mbibi ebighị ebi
Paolo Tescione	Edere ya November 16, 2020
Kedu ihe ị na-efu iji zọpụta onwe gị? Na-atụ uche Chineke, ya amara? Mana imara ihe O megoro gi, site na amara di uku, na Sakrament, na mkpalite, na-enye gi obara Jisos ... Ọbụna ugbua ị gaghi agbagha na Ọ nọ gị nso izọpụta gị ... Do enweghi ike? Ma Cycle bụ oghe nye onye ọ bụla… lack nweghị oge? Ma afọ niile nke ndụ ka a ga-enye gị ka ịzọpụta onwe gị. Ọ bụ na ndalata gị abụghị nke afọ ofufo?
Onye na-eme gị onwe gị ọnụ? Ekwensu? Mana ọ bụ nkịta na-agbọ ụja, nkịta agbụ nke na-enweghị ike ịta ụma ma e wezụga ndị jiri aka ha nabata aro ya adịghị mma… Ọchịchọ? Ma ndia adighi adota nani ndi na achoghi ibuso ha agha ... Adighi ike gi? Ma, Chineke anaghị ahapụ onye ọ bụla. Ikekwe akara aka gị? Mana mba, inwere onwe gi; ya mere ọ dabere na gị ... Kedu mgbaghara ị ga-ahụ n’ụbọchị ikpe?
Ọ dị mfe ịzọpụta onwe gị ka ọ bụ ịbụ onye a bụrụ ọnụ? O yiri ka o siri ike ịzọpụta onwe gị maka ịmụrụ anya mgbe niile, maka ọrụ iburu obe, ime omume ọma; ma amara nke Chineke nenwecha otutu ihe isi ike ... Ime ka ha buru ndi oru nke ekwensu onu banyere otutu nsogbu, ncheghari na nmegide nke ha aghagh ido onwe ha n'okpuru! Iji bụrụ onye a bụrụ ọnụ, ọ dị mkpa ime ihe megide akọ na uche na-achụgharị, megide Chineke nke na-atụ ụjọ, megide agụmakwụkwọ, megide echiche nke obi ... Ya mere, ọ siri ike ịbụ onye a ma ama. Ma ị na-ahọrọ nsogbu ndị a karịa ihe ndị achọrọ iji zọpụta gị?
OMUME. - Onyenweanyị, nye m amara ka ị ghara imerụ m ahụ!
Nke gara aga Post Gara aga post:Na-atụgharị uche taa na ihe kacha eme ka ị daa mba
Next Post → Post ozo:Pope Francis: Ruru nụ ndị ogbenye